SIDA LOO GOOYO CIRRIDKA BAKAYLKA GURIGA - XOOLAHA
Sida loo yareeyo cawska bakayle
Xakamaynta cawska gudaha ee bakaylaha gudaha waa mid ka mid ah hababka lagama maarmaanka ah ee loo hayo. Dhererka cirridka wuxuu si toos ah u saameynayaa caafimaadka xayawaanka.
Waxaad la xiriiri kartaa rugta caafimaadka xoolaha ee takhasus leh, adigana waad naftaada u sameyn kartaa gurigaaga, adoo helaya dulqaad iyo horayba loo tababaray.
Miyaan u baahanahay inaan jaro ciribta bakayle
In duurjoogta, marinnada bakaylaha ayaa loo baahan yahay marka ay ordaan si ay u xajistaan ​​dhulka, iyagoo dabeecad ahaan u qulqulaya iyaga. Ma jirto suurtogalnimada noocan oo kale ah ee qolka, sidaas darteed cirridku way koraan oo ay farageliyaan xayawaanka. Waxaa jira dhowr sababood oo ah baahida loo qabo in lagu xoqo cirridka bakaylaha:
Cawshiga dheer wuxuu ka hortagayaa xayawaanka in si siman loo qaybiyo miisaanka lugaha. Markaad guureysid, miisaanka jidhku wuxuu ku dhacaa ciribta, kaas oo kaabayaasha la sameeyay, iyo dhogorta ayaa laga tirtirayaa suufyada iyo nabarradaha nadiifka ah. Waxay sidoo kale ku dhejisaa faraha.
Xakamaynta ciriiriga ah waxay dhaawici kartaa dadka kale iyo lafta lafteeda.
Calaamad muujinaysa raaxo la'aanta waa in mawjada lafteeda ay bilaabato inay ciribtiranto cirbadeeda.
Waa muhiim! Xagaladu waxay u baahan yihiin in la gooyo si joogto ah marka ay koraan. Maadaama ay ku kortaan si kala duwan ee bakaylaha, habkan waxaa la samayn karaa bishiiba mar, iyo qof - saddexdii biloodba mar.
Si aad u ciribtirto cirridka, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso qalabka lagama maarmaanka ah, xajin iyo hagaajinta bakayle, ka dibna si taxadar leh u fuli nadaamka.
U diyaargarowga nidaamka
Si aad u sameysid timo, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso qalab - kuwani waxay noqon karaan ciriiri ah bisadaha iyo eyda, kuwaas oo ah laba nooc:
Nabarada ciddiyaha, maqas, kuwaas oo loo isticmaalo in lagu dubo bisadaha. Mabda'a hawlgalka ayaa la mid ah maqnaasha caadiga ah. Qeybta wanaagsan ee qalabkani - maneuverability waa weyn markaad timo jarjaraysid.
Xanuunnada Guillotine, loogu talagalay inay xoqdo cirridka eeyaha. Isticmaalida cirridka dheeraadka ah. Faa'iidada guillotine waa farsameynta saxda ah ee ciriiriga ee godka qalabka.
Waxaa sidoo kale jira clipper leh qalab nabdoon, si aanay u jarin xad-dhaaf ah. Haddii si lama filaan ah aad u gooysaa dhogorta aad u gaaban, dhiiggu wuxuu u muuqanayaa gooyaa, maxaa yeelay waxaa jira qallayl oo ku jira qaybta nool. Xaaladdan, qalabka gargaarka degdegga ah waa in lagu rakibaa xirmada gargaarka degdegga ah si loogu dabaqo qaybta. Maqnaanshaha miisaaniyadaas, waxaad isticmaali kartaa buri joogto ah.
Farmashiyaha, waxaad sidoo kale ka iibsan kartaa qalin qori ah, kaas oo aad ugu sahlan in lagu daboolo binderka si loo gooyo.
Si habsami u socodsiiya habsami u socodka bakayle, waa in si fiican loo hagaajiyaa. Intaas ka hor, xayawaanku waa in la xaqiijiyaa. Xayawaanka waxaa lagu beeray jilbaha oo la garaacay. Marka uu hoos u dego, waxaad u baahan tahay inaad xaddido dhaqdhaqaaqiisa si markaa inta lagu jiro nidaamka uusan bilaaban inuu jebiyo. Waa lagama maarmaan inaad si firfircoon u dhaqanto, laakiin si taxadar leh, si aadan u waxyeeleynin xayawaanka. Dadaalladaha waa in la sameeyaa oo keliya marka xayawaanka uu isku dayo inuu baxsado. Waa mamnuuc in la cadaadiyo dhabarka, sababtoo ah way sahlan tahay in lagu dhaawaco.
Akhri inta sano ee bakaylaha ku nool yihiin noocyada kala duwan ee guriga.
Si aad uga dhigto joojinta joojinta bakayle, waxaad u baahan tahay inaad ku hayso dhinacyada iyo miskaha lugahaaga. Cadaadiska noocan oo kale ah ayaa xasuusinaya dareenka uu dareemayo godka adag, oo ku hareereysan qaraabadiisa.
Badanaa, tarbiyadu waxay isticmaalaan hababka soo socda ee xayawaanka:
Waxaa suurtagal ah in la hagaajiyo bakayleka iyadoo si fudud loo riixayo dhabarka jirkiisa isagoo fadhiya fadhiga. Si arrintan loo sameeyo, waxaad ku jirtaa booska fadhiga oo raaxo leh. Xayawaanka waxaa lagu dhejiyaa miiska miiska, waxaana lagu riixaa gacanta. Waxaad u baahan tahay inaad sidan sameyso si ay timirta uugu laabato. Xaaladdan oo kale, xayawaanku waa inuu raaxaysto si uu u fariisto sidaas.
Fadhiga xayawaanka ee xayawaanka ayaa ugu jecel xayawaanka. Run, waxaa lagama maarmaan ah in loo isticmaalo cufan la dareemay, sida ugu dhakhsaha badan ee ay u muuqato gurigaaga. Mid ka mid ah gacanta ayaa ku habboon caloosha iyo xayawaanka xayawaanka, halka dhinaca kale uu qaato cagta iyo cirridka ayaa la gooyaa.
Habka ugu haboon ee qofku waa inuu ku duubo tuwaal. Xayawaanka waxaa lagu duuduubay tuwaal si markaa madaxu uu dibadda u joogo. Tani waxay gacan ka geysan doontaa in ay xayawaanka si fiican u hagaajiso, iyada oo aan wax dhibaato ah keenin. Bakteeriyada waxaa lagu dhajin karaa dhabta ama duleelka aan dusha lahayn. Nidaamku wuxuu ku bilaabmaa isbeddel dheeraad ah ee ciridka iyo jaridda cirridka iyaga ku yaal.
Qol aan la garaneyn ayaa sidoo kale ka caawin karta nidaamkaan. Xayawaankani waxay u dhaqmaan si degan meel cusub.
Ma taqaanaa? Timaha dheer ee sunta iyo dhabannada ee bakaylaha waa xubnaha taabashada. Iyada oo ay caawimaad, xayawaanku wuxuu u dhaqaaqaa mugdiga. Qiyaasta shaaribku waa siman yahay ballaca jidhkiisa, taas oo ka caawisa xayawaanka in ay qiyaasaan masaafada u dhaxeysa caqabadaha.
Timaha ugu horreeya waxaa lagula talinayaa inay sameeyaan da'da 2 bilood ee xayawaanka.
Ka fikir sida loo fuliyo talaabadan talaabo talaabo:
Ku bilaw timo jilbaha hore. Si aad u hesho helitaanka ciriiriga, waxay ku cadaadinayaan suufka oo u dhaqaa dhogorta. Ka hor intaan gudniinka laftiisa, waa lagama maarmaan in la go'aamiyo meesha saxaradu bilaabanto, unugyo nool oo leh xididdada dhiigga ee aan la taaban karin gudniinka.
Iyada oo qoynta ciddiyaha ah waxaad u baahan tahay inaad iska bixiso oo kaliya dhamaadka dhintay. Way ka fiican tahay in si tartiib ah looga saaro tallaabooyin yar, si aanay u keenin dhiigbax.
Ka dib markii la jarjarey, cagta ayaa si taxadar leh loo kormeero mar kale haddii ay jiraan qaybo fiiqan oo loo baahan yahay in la gooyo ama la gooyo, haddii ay jirto ciddida ciddida leh boodh weyn.
Baro naftaada dabeecada taranta taranta guriga, iyo sidoo kale waxyaabo waxtar leh oo ku saabsan noocyada noocan oo kale ah: California, Angora, madow iyo bunni, balastar, suugaanta dahabka, flandr, chinchilla soviet.
Waa muhiim inaadan iloobin inaad cirridka cirridka ku gooyo faraha xaglaha ah.
Waxaa lagu talinayaa in la qaato fasax ka dib markii la jarayo caws kasta si uu bakeyle u dego. Waxaad siin kartaa daaweyn jecel.
Video: Sida loo gooyo cawska
Maxaa dhacaya haddii aanad jarin cirridka bakayle
Cawska ayaa si joogto ah u koraya, oo haddii aan la jarjarin, waxay bilaabi karaan inay raaxo darro ku noqdaan xayawaanka, mustaqbalkana waxay keenaan dhibaatooyin caafimaad, kuwaas oo muujinaya kuwa soo socda:
baaqyada dhiigga ee kufadhiga;
isugeynta laf dhabarta;
xanuunka laabta marka aad sameyneyso talaabo kasta.
Sababtaas awgeed, dhagta ayaa ku jirta xaalad niyadjabsan, lumiso rabitaanka cuntada. Dhibaatadu waxay abuuri kartaa hogaaminta rasmiga ah ee rooga ama walxaha kale ee alaabta. Natiijo ahaan, xayawaanka ayaa la kulmi kara xanuunka daran, xannibaadda iyo dhiigbaxa ayaa bilaabmaya.
Ma taqaanaa? Markii hore, bakaylaha ayaa si ula kac ah loogu sii daayay jasiiradaha qalalan. Tani waxaa la sameeyey si ay u dhacdo haddii ay dhacdo in shil dhaco, dadka dhaawacmay ay lahaayeen wax ay cunaan jasiiraddaas.
Inkasta oo xaqiiqda ah in cirriduhu ay adag tahay, markii ugu horeysay waxaad isticmaali kartaa adeegyada khabiirka daryeelka xayawaanka. Waxa uu tusi doonaa sida si habboon loo fulin karo nidaamkan si uu u noqdo mid degdeg ah oo aan xanuun lahayn.